WARBIXIN: Labada Xiddig Ee Go’aamin Kara Kulanka El Clasico Marka Loo Eego Qaab Ciyaareedkooda. – Kooxda.com
HomeLa LigaWARBIXIN: Labada Xiddig Ee Go’aamin Kara Kulanka El Clasico Marka Loo Eego Qaab Ciyaareedkooda.
Indhaha Taageerayaasha Adduunka ayaa isha ku haya kulanka xiisaha iyo xamaasada leh ee El Clasico kaas oo caawa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ku dhexmari doona garoonka Alfredo Di Stefano kulan ka tirsan todobaadkii 30-aad ee horyaalka La Liga.
Labada kooxood ayaa kulanka soo galaya iyaga oo mid walba isha ku hayso 3-da dhibcood ee kulanka maadama ayna dhibcuhu u qaybsamin marka loo eego in ay labada kooxoodba isha ku hayaan hogaanka horyaalka La Liga.
Labada kooxood ayaa haysta xiddigo fiican waliba go’aamin kara kulanka iyaga oo waliba door weyn ka qaatay guulaha kooxdooda ee horyaalka La Liga iyo waliba tartamada oo dhan.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa laba xiddig oo go’aamin kara kulanka caawa marka loo eego qaab ciyaareedkoodii kulamadii uu dambeeyay tartamada oo dhan.
Xiddiga reer France ee Ousmane Dembélé ayaa ugu dambayn soo bandhigaya qaab ciyaareedkii ay Barcelona u soo iibsatay isaga oo xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah tartamada oo dhan.
Ousmane Dembélé ayaaba la odhan karaa waxa uu ka muhiimsan yahay kabtanka kooxda ee Lionel messi marka loo bar-bar dhigo kulamada uu kooxda Barcelona guusha muhiimka ah ku hogaamiyay uguna dambeeyay kulankii todobaadkii hore ee Real Valladolid ee uu kooxdiisa u dhaliyay goolka guusha.
Xiddiga Ousmane Dembélé ayaa xilli ciyaareedkan kooxdiisa u ciyaaray 36 kulan tartamada oo dhan waxana uu dhaliyay 10 kulan isaga oo sidoo kale caawiye ka noqday goolal intaas ka badan tartamada oo dhan.
Sidaas darteed xiddiga Ousmane Dembélé ayaa noqon kara xiddig kooxdiisa Barcelona ku hogaamiya guul muhiim ah oo ay aad ugu baahantahay.
Xiddiga Vinícius Júnior ayaa dhankiisa kulamadii ugu dambeeyay laf dhabar ka noqonaya kooxdiisa isaga oo u dhaliyay kulamo badan oo muhiim ah waliba soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah.
Xiddiga reer Brazil ayaa lagu dhaleecayn jiray gool la’aantiisa laakiin kulamadii ugu dambeeyay waxa uu muujiyay in uu horumar weyn ka sameeyay dhinacaas waxana uu kooxdisia u dhaliyay goolal muhiim ah.
Waxa ugu dambeeyay labadii gool ee uu ka dhaliyay kooxda Liverpool tartanka chamions League waliba ku hogaamiyay kooxdiisa guul muhiim ah oo ay hal lug ula galeen wareega xiga.
Xiddiga Vinícius Júnior ayaa kooxdiisa u ciyaaray 41 kulan tartamada oo dhan waxana uu dhaliyay 6 gool isaga oo sidoo kale caawiye ka noqday goolal kale oo kooxdiisu dhaliyeen.
Frenkie de Jong Oo Sameeyay Qirasho Ka Hor Kulanka El Clasico.
Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Wararka Sergio Aguero La Xidhiidhinaya Chelsea